INDLU KANOKUSHO ENKABENI YE-LUCHON - I-Airbnb
INDLU KANOKUSHO ENKABENI YE-LUCHON
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Cyril
Indlu enhle kakhulu etholakala komunye womgwaqo odume kakhulu wase-Luchon, ngamamitha ambalwa ezindawo ezikhangayo kakhulu zedolobha (izindawo zokudlela nezitolo ze-Allées d 'etigny, imoto ehamba phambili yokushushuluza eqhweni, igalofu, i-tennis, indawo yokubhukuda yomphakathi...). Ihlanganiswe nezindinganiso eziphakeme ngo-2017, indlu ingamukela kuze kube abantu abangu-12. I-TV, I-WIFI, ilineni enikeziwe, kufanele nje uze futhi ujabulele ukuhlala kwakho e- "Queen of the Pyrénées" (isibongo se-Luchon).
Indawo yaphansi : Igumbi lokuphumula elingaphezu kwamamitha-skwele angu-50 okukuletha endaweni engaphandle engu-150 SM enethala nendawo yokosa inyama ye-Weber ngezinsuku ezinhle. Ikhishi laseMelika elinakho konke, umshini wokuwasha...
Isitezi sokuqala: Amagumbi okulala angu-3 namagumbi okugezela angu-2.
Isitezi sesibili: okufanayo (amagumbi okulala angu-3 namagumbi okugezela angu-2).
Endlini yangasese ngezinga ngalinye.
Akuvamile, eduze nakho konke okungenziwa ukuhamba ngezinyawo. Imizuzu engu-20 yokushayela ukuya ekudleni ama-tapas ase-Spain. Amamitha angu-200 ukuya emotweni ye-cable ye-skyiing esiteshini se-Superbagnères noma ukwenza ibhayisikili lasezintabeni ehlobo lentwasahlobo.
Cadre de 49 ans, marié, 3 enfants.
Singakusiza ngezinto eziningi.